ထွေရာလေးပါး သာယာဝတီသား: “ လူတိုင်းဖတ်သင့်တဲ့ post လေးပါ ”
ကားပြင်ဝပ်ရှော့ (Workshop) ဆရာတစ်ယောက်ဆီမှာ ကားအင်ဂျင်တစ်လုံးကိုင်ဖို့ သွားအပ်ရင် -----
၀ပ်ရှော့ဆရာက အရင်ဆုံး အင်ဂျင်ကို တစ်စီဖြုတ်၊
ပြီးရင် အင်ဂျင်ရဲ့ Head နဲ့ Bar ပြင်တဲ့ဆိုင်ပို့၊ စလစ်ရိုက်တဲ့ဆိုင်ပို့၊
ကရိုင်းရှပ်သတဲ့ဆိုင်ပို့ စသဖြင့် တစ်ဆိုင်စီ ခွဲပို့မယ်။
Piston နဲ့ ring အသစ်ဝယ်ထည့်၊ Gasket one set တစ်စုံအသစ်ဝယ်ထည့်၊
နော်ဇယ်နဲ့ ပလန်ဂျာကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာဆိုင်ကို ပို့ပြီးပြုပြင်၊ ပြီးရင်ပြန်တပ်။ ရေတိုင်ကီဆေးတဲ့ဆိုင်ပို့၊
အင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်ဝယ်ထည့်၊ Filter လဲ၊
အဲဒီလို အင်ဂျင်တစ်လုံး ပြန်ကိုင်ဖို့အတွက် ၀ပ်ရှော့ဆရာက သက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းအလိုက် ပြုပြင်တဲ့ဆိုင် အနည်းဆုံး (၃)ဆိုင်လောက် ပို့ပြီးပြင်ရပါတယ်။
အသစ်လဲရမယ့်ပစ္စည်းအတွက်လည်း အနည်းဆုံး (၂)ဆိုင်လောက်က ၀ယ်ရပါတယ်။
တကယ်တော့ ၀ပ်ရှော့ဆရာ ဆိုတာ အကုန်လုံးကို လုပ်တတ်နေစရာမလိုပါဘူး။ တစ်စီဖြုတ်တတ်ဖို့၊ အပြစ်၊ ချို့ယွင်းချက်ကို တွေ့အောင်ရှာတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘယ်အစိတ်အပိုင်းကို ဘယ်ဆိုင်က ပြင်တာအကောင်းဆုံးဆိုတာတော့ သိထားဖို့လိုပါတယ်။ အသစ်ဝယ်လဲရမယ့်ပစ္စည်းအတွက်လည်း ဘယ်ဆိုင်က ပစ္စည်းက အမှန်ဆုံး၊ ဈေးအချိုဆုံးဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။ အားလုံးပြီးသွားရင် အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို မှန်ကန်စွာ ပြန်လည်စုစည်းတပ်ဆင် (Assembly) ပေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
အဲဒီလို အားလုံးတပ်ဆင်ပြီးသွားလို့ ကားတစ်စီးကောင်းသွားရင် ၀ပ်ရှော့ဆရာပဲ နာမည်ရပါတယ်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီပြင်တဲ့သူတွေကတော့ နာမည်မရပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုညံ့လို့ ကားမကောင်းရင်တော့ ၀ပ်ရှော့ဆရာပဲ နာမည်ပျက်ပါတယ်။ အဲဒီအစိတ်အပိုင်းပြင်တဲ့သူကို လူသိပ်မသိလိုက်ပါဘူး။
နာမည်ကျော် တိုယိုတာ ကားကုမ္ပဏီကြီးဟာလည်း သူကိုယ်တိုင် ဘာပစ္စည်းတစ်ခုမှ သိပ်မထုတ်လုပ်ပဲ ကားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီကို ရွေးချယ်ထုတ်လုပ်ခိုင်းပြီး ပစ္စည်းအပ်နှံခိုင်းတာပါ။
ပြီးမှ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို Assembly ပြုလုပ်လိုက်တာပါပဲ။ နာမည်ရတော့ TOYOTA ကပဲ ရပါတယ်။
အဓိကကတော့ အားလုံးအတွက် တာဝန်ယူရဲ၊ နာမည်ခံရဲရတာပါပဲ။
လူလောကမှာလည်း ဒီသဘောတရားအတိုင်းလို့ ထင်ပါတယ်။
သူကိုယ်တိုင် အားလုံးကို မလုပ်ပါဘူး။ လုပ်လည်း မလုပ်တတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သူ့လုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ Key Point တွေကို အသေအချာ နားလည်ထားတယ်။
သူလိုအပ်တဲ့ အဆင့်တစ်ခုစီရဲ့ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတွေကို ဘယ်သူ့ဆီကနေ ညှစ်ထုတ်ရရှိနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်း ကောင်းကောင်းကြီးသိနားလည်ထားတယ်။
ပြီးရင် အကောင်းဆုံး စုစည်းပေးတယ်။
အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အရည်အသွေးကို တစ်ချိန်လုံး ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တယ်။
အဆင့်အားလုံးအတွက် သူက တာဝန်ယူရဲတယ်။ နာမည်ခံရဲတယ်။
ဒီသဘောတရားကြောင့် အောင်မြင်မှုရရှိကြတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
Posted by ကိုမြင့်ကြိုင် at 7:08 AM
incheon - seogu, South Korea
NONENumberSharinganSharingan 2Hidden LeafAkatsuki CloudBlue MatrixGreen MatrixRed MatrixFICTION
ချွေးမလုပ်တဲ့သူက “ပေါ့တော့လဲ အရသာမရှိဘူး၊ ငံတော့လဲ...
Windows တင်ပြီးဆောင်ထားသင့်သော Software များစုစည်း...
မေတ္တာဟူသည် - ဘိုကလေး (ဦး)တင့်အောင် ရေးစပ်သည်...
၀ိုင်းဆုခိုင်သိန်း ( ပြန်လာပါခဲ့ပါတော့ )
ဒီဘလောက်ကိုလာလည်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. Awesome Inc. theme. Theme images by simonox. Powered by Blogger.